MUUQAAL: Banaanbixii ka dhacay Muqdisho iyo Eedaymo loo jeediyey Wasiir Goodax | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Banaanbixii ka dhacay Muqdisho iyo Eedaymo loo jeediyey Wasiir Goodax
Muqdisho ( Kalshaale ) Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay Banaanbax ay dhigeen kamid ah ardaydii maalmahan u fadhisay Imtixaanka shahaadiga Dugsiga ee xalay dowladu joojisay, Waxayna sheegeen inay siwayn uga soo horjeedaan, Iyagoo dhaleecayn kala duwan u jeediyey Wasiirka Waxbarashada.
Waxa ay ku dhawaaqayaan ardayda banaan baxa dhigaya ereyo ka dhan ah Wasiirka Waxbarashada ay kamid ahaayeen ha is casilo Wasiir Goodax iyo Ereyo kale oo Wasiirka lidi ku ah, iyagoo Xusay inay Muddo Saddex Casho ah Dedaal iyo Rafaad kasoo mareen Imtixaanka.
Ardayda ayaa sidoo kale waxay Cabasho ka Muujiyeen Rasaas Ciidamadu u adeegsadeen intii ay banaanbaxa dhigayeen, Taasi oo lagu kala Caydhiyey.
Ciyaalkaan waa fashilanyahay iyo caruurta Somaliya guud ahaan. Sababtoo ah, dad xaaraan quutayaal ah, ayaa guryo/villa inta uGu yeereen dugsi sarre, dhexe, iyo jaamacaddo, dadkaas caqliga xun lacagta uga gurto. Iyaga oo habayaraatee aanan waxba barrin. Hadii imtixaan dugsiga primariga ee hoose laga qaado ciyaal badan oo Somaliya jooga oo ku doodaya jaamacaddo Ayaan kasoo baxnay, waxaan ku dhaaran walaahi in eey ku dhici lahaayeen imitixaankaas. Sababtoo ah, waxba lama barrin. Hab iyo nidaamka lagu barray wax xataa ma caddo. Daanyeerta dhashay caruurtaan ee waalidka isku sheegtana waa cawaan caqli xun oo xisaabtan waxa layiraahdo maba yaqaanaan.
Dowlad iyo nidaam la’aanta waxaan in eey keeneeyso dadka daanyeerta maba oga. Umad dhan oo jaahil ah. Umad dhan, oo tuugo ah. Waalid dhan, oo caqli laheeyn.